बाँके समाचार – MeroJilla.com
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न Thursday, March 7th, 2019
सात बुदें प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको प्रभावकारिता बिषयक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा बास नेपालगन्जको सहजिकरणमा सो सुनुवाई सम्पन्न भएको हो । सरोकारवालाको रुपमा आसिन नगर ब्यक्तिहरु तथा नगरबासिहरुबिच भएको दोहोरो सम्बाद पश्चात गरिएका साझाँ सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरुमा..
‘दलगत स्वार्थका ट्रेड यूनियन खारेज गर्नुपर्छ’ Tuesday, March 27th, 2018
बाँके । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही हुने बताइरहेको बेला नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसमा साथ दिनुभएको छ । ‘खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ’ डा भट्टराईले मंगलबार पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, दलगत स्वार्थका ट्रेड यूनियन खारेज..
रेलमार्गको अनुगमन गर्न भारतीय टोली आएन Tuesday, March 13th, 2018
बाँके । रुपैडियादेखि कोहलपुरसम्मको रेलमार्ग निर्माण अध्ययनका लागि आउने भनिएको भारतीय रेल विभागका कर्मचारी सोमबार साँझसम्म नेपालगन्ज आएका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । भारतीय रेल विभागका कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पत्र पठाएर १२ मार्चका दिन रेलमार्ग अध्ययनका लागि नेपालगन्ज आउने जानकारी गराएका थिए । तर, सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्म पनि भारतीय टोली..
वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेस अतालियोः महरा Tuesday, November 7th, 2017
बाँके ,२१ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं मन्त्री कृष्णबहादुर महराले वाम गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस अतालिएको बताउनु भएको छ । उहाँले एमाले तथा माओवदी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा कटिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिँदै निर्वाचन भाँड्नका लागि आन्तरीक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरु लागिपरेको बताउनु भयो । नेपालगन्जमा संयुक्त वाम गठबन्धन भेलालाई सम्बोधन..
भन्सार छली गरी नेपालगन्ज भित्राइएका ३० लाखको सामान बरामद Sunday, October 29th, 2017
बाँके ,१२ कार्तिक । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय नेपालगन्जले भन्सार छलि गरी नेपालगन्ज भित्राइएको ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मेसिनरी सामान बरामद गरेको छ । युपी ३६ टी ७३०७ नम्बरको भारतीय ट्रकमा भन्सार छली गरी नेपालगञ्ज ल्याइँदै गरेको सुचनाको आधारमा प्रहरीले करिब ३० लाख रुपैयाँ पर्ने मेसिन र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको हो । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय नेपालगञ्जका..
अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेका बाढीपीडितलाई छाकको भन्दा जाडोको चिन्ता Friday, October 27th, 2017
बाँके, १० कार्तिक । अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेका राप्ती–सोनारी गाउँपालिका टिकुलीपुरका बाढीपीडितलाई चिसो बढेसँगै रात गुजार्न मुस्किल परेको छ । अस्थायी रुपमा बनाएको छाप्रो र सरकारले दिएको त्रिपालले शीत छेक्न छाडेपछि चिसोमा रात गुजार्न मुस्किल परेको बाढीपीडितको गुनासो छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ। त्रिपालबाट शीत चुहिन र स्याउलाले बनाएको छाप्रोले हावा र शीत छेक्न नसक्दा..
नेपालगंजमा ‘नेपाल फोटो प्रर्दशनी’ सुरु Wednesday, April 26th, 2017
नेपालगंज, १३ बैशाख । नेपाली फोटोपत्रकारिता दिवसको अबसरमा ‘ नेपाल फोटो प्रदर्शनी यात्रा ’ नेपालगंज आईपुगेको छ । बैशाख १३ गतेलाई नेपाली फोटो पत्रकारहरुले फोटोपत्रकारीता दिवस मनाउदै आएका छन् । यसै अबसरमा फोटो पत्रकार क्लब (पिजे क्लब)ले अन्तराल मिडीयाको सहकार्यमा आइएमई–ग्लोबल–आइएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७३ मा छानिएका उत्कृष्ठ तस्बिरहरुको प्रदर्शनी..
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई सभापति देउवाको निर्देशन Tuesday, January 24th, 2017
कोहलपुर (बाँके), ११ माघ - नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तयारी गर्न नेपाली काँग्रेस बाँकेलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका सर्वमान्य नेता तथा लौहपुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंहको पूर्ण कदको सालिक अनावरण गर्न बाँके आउनुभएका काँग्रेस सभापति देउवाले नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बाँकेले..
नेपालगन्जमा खुलेन सुपथ पसल Tuesday, September 20th, 2016
काशी पोख्रेल बाँके, ०४ असोज । सरकारले शनिवारदेखि देशका मुख्य सहर तथा जिल्ला सदरमुकाम हरुमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालगन्जमा भने सञ्चालन हुन सकेन । दसैं तथा तिहारका समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानको समन्वयमा सस्तो उपभोग्य..
दशैंका लागि बोका किन्दै हो ? पख्नुस् !
काशी पोख्रेल बाँके, ०४ असोज । दशैंलाई लक्षित गरेर पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट नेपालगन्जले खसीबोकाको स्वास्थ्य परिक्षणलाई तीब्र पारेको छ । नेपालगन्ज पशु क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट प्रमुख डा. शंकर पाण्डेका अनुसार अस्वस्थ रोगी खसीबोकाबाट अरु खसी बाख्रामा थुप्रेै रोग सर्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य परिक्षणलाई तीब्र पारिएको हो । रोगी पशुबाट मानिसमा समेत कैयौं जुनोटिक रोगहरु सर्न..
बाँकेमा डरलाग्दो र भयावह बन्दै आत्महत्या Wednesday, August 24th, 2016
काशी पोख्रेल बाँके, ८ भदौ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ वेलासपुरमा बस्दै आएका ५५ वर्षीय सोमबहादुर कार्कीले आफैले आफ्नो देह त्याग गरे । चितवन स्थायी घर भएका कार्की केहीवर्ष अघिदेखि नेपालगन्जमा डेरा लिएर बस्दै आएका थिए । साउन १ गते विहान करिव पाँच बजे उनले वाटरपार्कमा निर्माणाधिन मुल गुटमा झुन्डिएर देह त्यागे । लागुऔषध प्रयोगकर्ता कार्की पैसा अभावमा चोरीडकैतीमा पनि..